စင်္ကာပူ နိုင်ငံက ကြီးထွားလာနေတဲ့ လိင်ကုန်ကူးမှု လုပ်ငန်းအကြောင်း အယ်ဂျာဇီးရား ရုပ်သံကနေ ရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ဗီဒီယို ကလစ်လေးပါ။ စင်္ကာပူက ဂေးလမ်းမှာ ဘာတွေ ရောင်းလဲ မေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် စင်္ကာပူက ဂေးလမ်းက ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းပေါ့... :P
အစ်ကိုရေ. စင်ကာပူမှာနေတာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပေမယ့်.. မရောက်ဖူးဘူးဗျ..
သိတော့ သိချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် ရှက်တာနဲ့ မရောက်ဖြစ်တာ.. အဖေါ်မကောင်းတာလည်းပါတာပေါ့ဗျ.. အခုလို့.. post တင်ပေးတဲ့အတွက်
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ.. သွားစရာမလိုဘဲ. သိရပြီပေါ့..
မိုက် တယ် ....
နောက် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး နော်...
မိုက်တယ်ကွာ ကိုယ်တို့ အမေရိကားမှာတောင် အာရှသူ ဒီလောက်များများစားစား လမ်းပေါ်မှာ မတွေ့ဖူးဘူး
စင်င်္ကာပူကို သွားလည်ဖို့ အတွက် ဒီလိုမျိုးကြော်ငြာပေးမှ
နိုင်ငံခြားသား အလည်အပတ်တွေ များများလာမှာ
Feel free to visit my blog ... viavio.net
lot of your post's to be exactly I'm
Also visit my homepage :: espaceface.com
Look at my website :: https://www.teamgeorgiawrestling.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=98668&Itemid=0
Here is my web page - website.kamsgraphics.com
Feel free to visit my blog: http://greenhost.ro
my site :: chatalone.com
my blog - http://professionalsite.net/vb4/entry.php?21714-A-Wonderful-Englishman-In-Madrid-JMW-Turner-%281775-1851%29-Painting-Exhibition-At-The